Umthetho Obaluleke Kakhulu Kuma-Social Media PR | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 28, 2010 NgeSonto, Agasti 19, 2012 URyan Smith
Ufuna ukwazi ingxenye engcono kakhulu yokusebenzisa imithombo yezokuxhumana njengengxenye yemikhankaso yakho yokuxhumana nomphakathi? Ayikho imithetho.
Abantu be-PR bahlala bekhunjuzwa ngemithetho. Kufanele silandele i-AP Stylebook, ukukhishwa kwezindaba kufanele kubhalwe ngendlela ethile futhi kwenziwe ngezikhathi ezithile.
Imithombo yezokuxhumana iyithuba lokuthi inkampani yakho yephule isikhunta futhi yenze okuqukethwe okuyingqayizivele okubaluleke kakhulu emphakathini wakho. Igama eliyisihluthulelo lithi okuqukethwe. Okuqukethwe yinhlamvu yesiliva. Uma ungadala okuqukethwe okuthokozisayo nokusha, lapho-ke uzoba isinyathelo esisodwa eduze kokuhlangabezana nezinhloso nezinhloso zakho.
Usuyazi vele ukuthi ngikhuluma ngani. Ngabe wake wanquma ukusesha iwebhusayithi yenkampani noma ikhasi le-Facebook kuphela ukuthola ukuthi alikho? Noma lokho akukabuyekezwa kusukela ngoMashi 2008? Lezo zinkampani ziwela ku-radar yakho, futhi zilahlekelwa ukwethemba nokuhlonipha kwakho.
Ukwakha okuqukethwe okusha nokuhehayo akugcini ngokudonsela abantu kumasayithi akho, kepha kubayenga nokuthi babuye. Ukhiye wokuthola okuqukethwe okulungile ulula: thola ukuthi izivakashi zakho zifunani, bese uqhubeka uzenza. Akunandaba ukuthi iyiphi ipulatifomu. I-Twitter, i-Youtube, i-Flickr, i-Foursquare, noma i-blog… thuthukisa okuqukethwe komsebenzisi wakho okubhekiswe kukho futhi ukukugcine kuza.
Isu lezokuxhumana inamandla, kepha futhi iyajabulisa ngabantu be-PR ngoba siyakwazi ukuzama izinto ezahlukahlukene futhi sihlole imiphumela cishe ngesikhathi sangempela. Ukusuka lapho singaguqula umkhankaso wethu ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi wethu. Ukuze uphumelele ku-inthanethi awukwazi ukwesaba zama okuthile okusha. Uma amakhasimende akho efuna izithombe zebhizinisi lakho ke wabanikeze izithombe. Uma befuna ukubona izindaba ezivela ngaphakathi nangaseduze kwemboni yakho, bese ubanikeza zona.
Ubudlelwano bomphakathi abuguquki. Ishintshile. Kukuwe njengochwepheshe we-PR ukuqonda amandla namathuba ezinkundla zokuxhumana, bese wenza isu lokusebenzisa wonke amathuluzi esesondele kuwo. Lawa mathuluzi amasha futhi kubalulekile ukufunda empumelelweni yakho, njengoba ubuyokwenza nokwehluleka kwakho.
Tags: ezimayelana Nomphakathisocial mediaSocial Media Marketingizinkundla zokuxhumana pr
Jul 29, 2010 ngo-1: 54 PM
Okuthunyelwe okuhle uRyan. Kuthiwani ngasohlangothini lwezinto ze-ejensi kodwa? Amakhasimende amaningi esisebenza nawo @Vocenation awafuni ukuchitha i- $$$ ukuzama izinto ezintsha. Bafuna ukuchitha i- $$$ kuzincomo ezivela kokuhlangenwe nakho futhi okuzoqinisekiswa ngemikhombandlela yokumaketha. Ezinye izimpikiswano ezindala (futhi ngeminyaka yobudala ngiqonde iminyaka eyisi-6 eyedlule) lapha kodwa lokhu bengicabanga nje sonke isikhathi lapho ngifunda okuthunyelwe kwakho.
Jul 29, 2010 ngo-7: 58 PM
UColin, ngibona lokhu kakhulu. Engizama ukukushayela ekhaya nala mathemba ukuthi leloqhinga liyasebenza noma cha. Uma kunjalo, kulungile… umzila ophephile onokukhula okulinganiselwe kungaba yindlela ongayithatha. Kodwa-ke, ngithanda ukukhombisa idatha kanye nokuhlaziywa kokukhula kwe-inthanethi, ukusesha, ukubamba iqhaza kwezenhlalo, njll okufakazela ukuthi isimilo siyashintsha.
Kwesinye isikhathi amathemba awakholelwa ukuthi izinto zishintshile… futhi ngiphumelele lapho. Kodwa-ke, abanengqondo bayalubona ushintsho futhi ngiyabaqinisekisa ukuthi indima yami ukubasiza kulolu shintsho.
Jul 29, 2010 ngo-8: 10 PM
Lokhu ngikuthola kumakhasimende amaningi, "Ungasikhombisa isu elibonisiwe, futhi lisebenze?"
Impendulo ithi 'kunjalo', kepha akulula ngaso sonke isikhathi. Yonke inkampani, bonke ubuntu budinga uhlobo oluhlukile lwezwi. Ngakho-ke, isu elifanayo ngeke lisebenze ngaso sonke isikhathi.
Dala uhlelo, kepha phambuka kuhlelo lapho kuvela okuthile okumangazayo. Ubuciko obuhlelekile buholela ekukhangiseni okuhle kakhulu, ku-inthanethi noma ngenye indlela. Lowo umbono wami nje!
Jul 29, 2010 ngo-11: 48 PM
Njenge-VP yangaphambili yezokuxhumana ezinkampanini, ngiyabonga umbono wakho ngemithetho. Kepha futhi ngiyaqonda ukuthi kunesidingo sokuthi kube nemihlahlandlela evikela inkampani nomakhi wokuqukethwe. Futhi ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi uma i-PR idala okuqukethwe, kufanele ikhumbule umthelela wayo ku-PR, ukumaketha, uphawu, ukuxhaswa kwamakhasimende nokuthengisa. Kungenza ngicabange ngokudla i-dessert kuphela ngesidlo sakusihlwa. Ngingumuntu omdala. Ngingadla engikufunayo, noma kunini lapho ngifuna khona. Lokho akusho ukuthi ngizokwenza. 🙂